यौन अनुभूति – JanaSanchar.com
यौनसंपर्क पश्चात योनी चिलायो, पोल्यो दुख्यो के गर्ने ?
यौन सम्बन्ध सुखद र प्रिय हुदाहुदै पनि कहिलेकाही कुनै महिलाहरुलाई पुरुष साथीसँग यौन सम्बन्ध गरिसके पश्चात योनी चिलाउने, यौनांङ्गमा पोल्ने, दुख्ने रातो हुने या अप्ठेरो महसुस हुने गर्छ । यस्तो समस्या उनीहरुले खुलेर यी समस्याका बारेमा अरुलाई भन्न पनि सक्दैनन् जसले गर्दा यस्ता महिलाहरुमा लामो समयसम्म तनाव हुने गर्छ । यसको कारण धेरै..
अविवाहित युवतीले कारागारमा जन्माइन बच्चा
जिल्ला कारागार झापामा थुनामा रहेकी बीस वर्षीया एक युवतीले शिशु जन्माएकी छन् । कारागार प्रमुख यज्ञराज निरौलाका अनुसार सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकी अविवाहित महिलाले मेची अञ्चल अस्पतालमा बुधवार राति छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् । आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यावस्था सामान्य रहेको र आजै अस्पतालबाट दुवैलाई..
यौन सम्बन्धको चर्चा गर्दा हामी लाजले खुम्चन्छौं । यौनलाई छाडा वा लाजमर्दो कुराको रुपमा हामीले बुझेका छौं । जबकी यो जीवन पद्धतीकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो प्राकृतिक र स्वभाविक प्रक्रिया हो । यौन मनोरञ्जन मात्र होइन । यौनले सृष्टिलाई चलायमान राख्छ । यौनले दाम्पत्य जीवनलाई पूर्णता दिन्छ । यौनले पति-पत्नीलाई थप निकट राख्छ । यौनले..
सेक्स प्राकृतिक कुरा हो । हरेक प्राणीले आफ्नो किसिमले कुनै न कुनै तरिकाले त्यसको आनन्द लिइरहेका हुन्छन् । सेक्सको सम्बन्ध प्रजननसँग जोडेर हेरिन्छ । यौनलाई पछिल्लो समय मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा पनि लिइएको छ । मानिस जतिबेला पनि सेक्स गर्न इच्छुक हुँदैन । पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उत्तेजित हुने गर्दछन् । महिलाहरुको सेक्समा रुची..
यौनसुखका लागि दम्पत्तिले जान्नैपर्ने कुरा
दाम्पत्य जीवनमा यौनले मनोरञ्जनको स्थान मात्र लिएको हुँदैन । यसले वंश निरन्तरतालाई मात्र धानेको पनि हुँदैन । यौनले दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय र सुमधुर बनाइरहेको हुन्छ । सफल दाम्पत्यमा सक्रिय यौनको भूमिका अहम् हुन्छ । यौन सम्बन्धले दम्पत्तिलाई थप निकट राख्छ । अक्सर दम्पत्तिबीचको खटपट यौन सम्बन्धबाटै उब्जने गर्छ । जब यौनमा सुखभोग मिल्दैन,..
मोडल स्मिता थापाको बोल्ड अभिव्यक्ति : टन्न भोड्का खाएर वाईल्ड सेक्स गर्न मन छ
काठमाडौँ २४ पौष । नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा विभिन्न हर्कत देखाएर चर्चामा आउने नाम हो स्मिता थापा । उनलाई आधार मानेर लेखक राजेन्द्र थापाले खेलौना नामक पुस्तक समेत लेखेका छन् । उनै मोडल थापाले डेढ वोतल भोड्का खाएर वाईल्ड सेक्स गर्ने चाहना व्यक्त गरेकीछिन् । पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा थापाले भनिन्,“म ह्विस्कीको पारखी हुँ, मलाई..
केही विषयलाई विश्वव्यापी सत्यका रूपमा लिइन्छ। मान्छेका भाषा फरक छन्। उनीहरूले खाने परिकार फरक छन्। व्यवहार फरक छन्। यो फरकबीच पनि सत्यचाहिँ के हो भने संसारभर करोडौंले ‘पोर्न मुभी’ हेर्छन्। मान्छेलाई मनोरञ्जन (आनन्द) दिने यही पोर्नलाई समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमुख कारकका रूपमा पनि लिइन्छ। इन्टरनेटमा सहजै उपलब्ध हुने भएकाले..
महात्मा गान्धी आफ्नै बहिनी र युवतीहरुसँग नाङ्गै भएर सुत्नुको कारण यस्तो थियो
सारा भारत वर्षले ‘बापू’ भनेर पूजा गरेका महात्मा गान्धी के पुजिनलायक थिए त ? आउनुहोस् थाहा पाउनुहोस् अहिंसाको आन्दोलन चलाएर विशाल बेलायतको उपनिवेशलाई भारतबाट खेदाउने श्रेय पाएका गान्धीको वास्तविकताः सन् १९०६ मा जब गान्धीले ब्रम्हचार्य धारण गरी बस्ने फैसला गरे त्यसबेला उनी ३८ वर्षका मात्र थिए । वास्तवमा गान्धीजी कामवासनाले मनमा हिंसा..
इमेल: [email protected]ail.com